मञ्जरी | मझेरी डट कम
अनायसै मञ्जरीको नजर आफ्नो शरिरको मध्ये भागमा पर्यो । ‘लौन नि ! छाती पनि पो उचालिएछ’, खङ्ग्रङ्ग भई मञ्जरी । हजुरआमाले सधैं जसो फलाक्ने गरेको झट्ट सम्झना भयो मञ्जरीलाई, “यो तरुनी भइसकी पर सर्ने बेला भयो अब ।” ऐनामा आफ्नै अनुहार हेर्न लाज लाग्यो उसलाई । दुई हातले छोपी । उसले एक प्रकारको थप भित्री लुगाको पनि आवश्यकता महशुस गर्दा गर्दै झट्ट सम्झी, “साच्ची अब देखि त नुहाँउदा छाती पनि छोप्नु पर्यो नि !” यसमा चाहिं ठूलै समस्या महसुस गरी मञ्जरीले । हिजोसम्म छाती नछोपी नुहाएको मान्छेले अचानक छाती छोपेर नुहाउँदा के के चाहिँ भन्ने हुन् ? नछोपौ तेसै भएन छोपौ कति उडाउने हुन् ? धारामा कहिल्यै मान्छे टुट्दैनन् त्यसमाथि । अब बस्न मुस्किल छ यो गाउँमा । सहरमा भने त्यस्तो हुदैँन । नहाउने कोठा अलग्गै हुन्छ । त्यहाँ गाउँका जस्ता पात्तिएका मान्छे पनि हुँदैनन् । कसैले कसैको मतलव गर्दैन । चुकुल लगाएपछि छोपे पनि भयो, नछोपेपनि भयो । कसैले केही भन्दैन । दिन दिनै नुहाउने फुपूलाई कहिल्यै कसैले साधेको सुनेकी पनि छैन नुहाए पछिका चिसा लुगा खोई भनेर । ती लुगा कसरी भिजेनन् भन्ने मनमा उब्जिएका जिज्ञासा निकै समय पछि मात्र हल गरेकी थिई मञ्जरीले ।
आफ्नो पुरै गाउँमा अनियन्त्रित छाडापनको महामारी फैलिएको आभास भएको छ मञ्जरीलाई । सबै जना प्रत्येक कुरालाई घुमाई फिराई अश्लितामा लगेर जोड्छन् उनका गाउँलेहरू । हुँदा हुँदा सत्यनाराणको पुजामा समेत अरु कथालाई छोटकरीमा सकेर गोपिनीका बस्त्रहरणमा नै रात छर्लङ्ग बाइदिन्छन खैजडी बजाउदै किर्तन गाउने हजुरबाहरू । यो फोहोरी समाजबाट भागेर कुनै सफा समाजमा जाने चाहना हुन्छ मञ्जरीलाई । सफा समाजको रुपमा शहर मात्रै देखेकी मञ्जरीले आफ्नो उचित गन्तव्य शहर नै भएको ठहर गरी । फेरि शहरमा काम पनि सजिलै पाई हालिन्छ । काम सिकाउदै गरे हुन्छ भनेर दिदीलाई भेट्न आउनेले त भनेकै थियो । भरे बा आएपछि फुपूसँगै सधैँ उतै बस्ने गरी सहर पठाइदिनु भनेर जिद्दी गर्नका लागि बहानाहरू सोच्न थाली मञ्जरी । उता मन्द ध्वनिमा रेडियो गाउँदै थियो, “..... भागेर जाँउ कुन ठाउँ जाँउ ? मान्छे नमर्ने शहर हुदैन ।”
अङ्क २८, अभिनब, साहित्य प्रधान पत्रिका । वर्ष १६, २०७३ कार्तिक ।
मझेरीमा पहिलो पटक प्रकाशित - 2016-12-11 03:59:48
सुन्दर मनो बिश्लेषण युक्त
एकदेव — Sat, 10/07/2017 - 08:54
सुन्दर मनो बिश्लेषण युक्त कथा।